Ra’iisul wasaare Kheyre oo safarkiisa ugu horeeyay oo dibadda ah ugu dhoofay dalka Qadar – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Kheyre oo safarkiisa ugu horeeyay oo dibadda ah ugu dhoofay dalka Qadar
Wafdi uu hoggaaminaayo ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, iyagoona kusii jeeda magaalada Doha ee dalka Qadar.
Safarka ra’iisul wasaare Kheyre ee dalka Qadar ayaa kusoo beegmay waxyar kadib markii uu magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.
Ra’iisul wasaare Kheyre ayaa uljeedka safarkiisa la sheegay inuu yahay, kadib markii lagu casuumay shirka Doha Forum oo sanadkiiba mar lagu qabto magaalada Doha ee dalka Qadar.
Shirka sanadkaan ee Doha Forum ayaa ah mid diiradda lagu saari doonno arrimo ay ka mid yihiin dhaqaalaha, amniga iyo qaxootiga, waxaana shirkan ka qeyb galaya hay’addo caalami ah, deeq bixiyaal iyo siyaasiyiin dunidda caan ka ah.
Shirkaan ayaa lagu wadaa in maalinta berri ah uu ka furmo magaalada Doha, waxaana shirkaan furi doonna wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Qadar Sheekh Maxamed Bin Cabdulraxmaan Al-Thani.
Dhinaca kale, ra’iisul wasaare Kheyre ayaa inta uu dalkaasi Qadar ku sugan yahay, waxa uu kulamo kala duwan la yeelan doonnaa madaxda dalkaasi, isagoona kala hadli doonno xariirka labada dal iyo sidii ay dowladdaasi Qadar gacan u siin lahayd dowladda federaalka Soomaaliya.
Safarkaan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay uu ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre dalka uga baxo tan iyo markii uu xilka loo doortay 23-kii bisha Febraayo ee sanadkaan 2017-ka.